Sierra Leone:waanu ka digtoon nahay hanjabadda Al-shabaab | Berberanews.com
Home WARARKA Sierra Leone:waanu ka digtoon nahay hanjabadda Al-shabaab
Sierra Leone:waanu ka digtoon nahay hanjabadda Al-shabaab
Somalia-(Berberanews) — Xukuumadda Sierra Leone, ayaa sheegtay inay ka digtoontahay hanjabaad uga timi kooxda Al-shabaab oo sheegtay inay weerari doonto askarta Sierra Leone ee ka qaybqaadanaya howlgalka Midowga Afirka ee Soomaaliya (AMISOM).
Warsaxaafadeed kasoo baxay xukuumadda Sierra Leone ayaa lagu sheegay inay ka go’an tahay howlgalka lagu soo celinayo nabadda Soomaaliya, isla markaana aysan wax cabsi ah gelinayn hanjabadda Al-shabaab kasoo baxday.
“Xukuumadda Sierra Leone way ka digtoon tahay hanjabadda Al-shabaab kaga timid ee ah inay weerari doonana ciidamadooda ka qaybqaadanaha howlgalka AMISOM. Balse waxaan rajeynaynaa inaysan taasi cabsi na gelin oo aan howgalka qaybteena ka qaadanno, waayo innagaba waa nala caawiyay intii dalkeennu ay dagaallada ka socdeen,” ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka kasoo baxay xukuumadda Sierra Leone.
Sidoo kale, xukuumaddu waxay sheegtay inay shacabkeeda ku wargelisay in warka kasoo baxay Al-shabaab uu yahay mid khatar ah, balse ay ka weyn tahay howsha ay doonayaan inay ka qabtaan Soomaaliya.
Dowladda Sierra Leone oo ka mid ah dalalka ku yaalla Galbeedka Afrika ayaa waxaa lagu wadaa inay ciidamadeedu yimaadaan Soomaaliya bisha Juune ee sannadkan iyagoo ka howlgeli doona gobollada Jubbooyinka oo ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya.
Xarakada Al-shabaab ayaa horay u sheegtay inay weerarayso ciidamada ka socda dalka Sierra Leone ee la keenayo Soomaaliya, iyadoo uga digay shacabka maamulka dalkaas inay ciidamadooda keenaan Soomaaliya, haddii ay ceshan doonaan iyagoo mayd ah.
Sierra Leoen waxay ugu baaqay shacabkeeda uu saaran yahay ma’suuliyadda ammaanka dalka, iyadoo dadkeeda ku wargelisay inay kala shaqeeyaan ciidamada ammaanka sidii ay ugu soo wargelin lahaayeen wax walba oo ay u arkaan inuu khatar ku yahay ammaanka dalkooda.
Previous articleحكومة أرض الصومال يشجع المستثمرين الدوليين والوطنيين للاستثمار في تطوير ميناء بربرة
Next articleIndia iyo Pakistan oo dhoolatus dhinaca hubka ahi dhexmiranayo iyo tijaabooyin cusub oo ay sammeeyeen